Howlgal laga sameeyay degano ka tirsan Shabeellaha Dhexe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Howlgal laga sameeyay degano ka tirsan Shabeellaha Dhexe
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 3aad ee qeybta 27aad oo ay wehlinayeen Ciidamada Booliska Maamulka Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay howlgal ka sameeyeen degaano dhowr ah oo hoostaga Magaalada Jowhar.
Degaannada ay howlgalka Ciidamada ka sameeyeen ayaa waxaa kamid ah, Gumareey, Moora-jiido, Jameeco, Gololeey Mobleen, Saarsaare, Madax Gisir, Casir Maal oo dhamaanrood u dhow tuulada Qalimoow ee Gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Howlgalka oo ay horkacayeen guddoomiye kuxigeenka Amniga Gobolka Shabeellaha Dhexe & Saraakiisha Ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Booliska Hir-Shabeelle ayaa ukeedkiisa waxaa ay ku sheegeen in uu ahaa mid lagu xaqiijinayay Amniga guud ee degaannada hoostaga Magaalada Jowhar.
Guddoomiye kuxigeenka Amniga Gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage ayaa sheegay in howlgalka uu qeyb ka ahaa sugida Amniga doorashooyinka si ay uga warqabaan Amniga degaannada u dhow Magaalada Jowhar.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxaa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen degaano hoostaga Magaalada Jowhar, iyaga oo mararka qaar weeraro kala kulma Al-Shabaab.
Howlgal laga sameeyay degano ka tirsan Shabeellaha Dhexe was last modified: December 3rd, 2021 by warsan radio
Guddiga Dib u eegista Dastuurka oo Qaybo ka mid ah wareejiyay.